I-supplementary loss loss supplement-- i-Rimonabant powder
I-supplementary loss loss supplement- Rimonabant powder
/Blog/Rimonabant/I-supplementary loss loss supplement- Rimonabant powder
ezaposwa ngomhla 04 / 15 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Rimonabant.
Yonke into malunga ne-Rimonabant powder
1.History yeRimonabant powder
3. Igama leBrithani ye-Rimonabant powder
5.Mechanism of action- Rimonabant powder?
I-6.I-powder Rimonabant isebenza njani?
7.Yintoni i-Rimonabant powder esetyenzisiweyo?
8.Rimonabant powder yokukhululeka okanye ukukhuluphala
I-9.Rimonabant powder dosage
I-10.Izibonelelo ze-Rimonabant powder kunye neRimonabant powder benefits
11. Isixwayiso kwi-Rimonabant powder
I-12. Imiphumo emibi ye-Rimonabant powder
Ukuhlaziywa kwe-powder 13.SRimonabant
I-14.Rimonabant ipowuni yefowuni Iresiphi
I-15. Ngaba i-Rimonabant powder nayo inceda ukuyeka ukutshaya?
I-16. Ziyintoni iziphumo zeeRimonabant powder zovavanyo lwetliniki?
17.Rimonabant powder yokuthintela imicimbi ye-cardiovascular
18.Buy i-Rimonabant powder online
Rimonabant powder ividiyo
IRaw I-Rimonabant powder isiseko Abalinganiswa:
igama: I-Rimonabant powder
I-molecular Formula: C22H21Cl3N4O
Isisindo somzimba: 463.79
1. Imbali ye I-Rimonabant powder
I-Rimonabant powder yafunyanwa e-UK ekuqaleni kukaJulayi 2006 kunye ne-2008, kwakukho amazwe e-56 apho ayifumaneka khona. Kwaye kwenzelwe abantu abane-BMI enkulu kune-30 okanye abantu abane-BMI abangaphezu kwe-27 kodwa babenezinye izinto ezinobungozi ezifana ne-dyslipidemia kunye nohlobo lwe-2-isifo sikashukela.
NgoJuni 2006, iKhomishini yaseYurophu yavuma ukuthengiswa kwayo kwaye yafakwa kwi-FDA yokuvunyelwa kwe-US. Nangona kunjalo, ii-EMDAC ze-FDA zivotele ngokuchasene neziyobisi, ekugqibeleni ukuba iSanofi-Aventis, abenzi be-Rimonabant powder eluhlaza, babengabonakali ngokukhuselekileyo ukhuseleko. E 2009, EMEA yarhoxa Acomplia, emva asimise oko 2008, ngenxa yeziphumo ebezingalindelekanga ezinzima nangokwasengqondweni ichiza, ezifana notyekelo ukuzibulala. FDA ayizange ivunyiwe I-Rimonabant powder kwaye ngoko, akakaze athengiswe e-US.
2. I-Rimonabant powder
I-Rimonabant powder yi-anorectic izidakamizwa ezichasene nokunyanya zenziwe kwaye zithengiswa nguSanofi-Aventis. I-agonist inverse ye-receptor ye-cannabinoid CB1. Isiphumo esona siphumelelo sinciphisa ukutya. I-Rimonabant powder eluhlaza yiyona yokuqala ye-CB1 receptor blocker eya kuvunywa ukuba isetyenziswe naphi na emhlabeni. I-rononabant powder eluhlaza ivunyiwe kumazwe e-38 kuquka i-EU, iMexico, neBrazil. Yayinqatshelwe ngokuvunyelwa ukusetyenziswa e-United States. Esi sigqibo senziwe emva kwephaneli ye-advisory yase-US isincomo sokuba iyeza lingavunyelwanga kuba liyakwandisa ukucinga nokuzixina.
Amanye amagama eRimonabant powder yiZimulti, Acomplia, Monaslim, iBethin, Riobant, Remonabent, iRimoslim neRiomont.
4. I-Rimonabant powder
Igama lemveliso I-Rimonabant powder
I-Molecular Formula C22H21Cl3N4O
Isisindo somzimba 463.79
Melt Point 230-240ºC
ukugcinwa Temp Ifriji
umbala I-White okanye i-white powstalline powder
5. Indlela yokusebenza-I-Rimonabant powder
I-Rimonabant powder eluhlaza yi-CB1 ye-cannabinoid receptor antagonist. Kukho ubungqina obuninzi bokuthi i-endocannabinoid (i-endogenous cannabinoid) inkqubo idlala indima ebalulekileyo ekuqhubeni umbane kunye nokuziphatha okuhambisanayo. Ngoko ke ngqiqweni hypothesize ukuba eziphango yomsebenzi kule nkqubo iza kuba nenzuzo kwezonyango ekunyangeni izifo ezinokuba ube necandelo lwe drive appetitive kwemfuneko okanye ngaphezulu-umsebenzi kwenkqubo endocannabinoid, ezifana nokutyeba, ethanol kunye nezinye kakubi iziyobisi, kunye neenkqubo ezahlukeneyo zeentlaba kunye nezinye iingxaki.
6. Ingaba kwenzeka njani Umsebenzi wePowinabant powder?
• I-Rimonabant powder yenza ngokuthintela ngokulandelelanayo i-CB1 receptors efunyenwe kwingqondo kunye nasezimbilini zomzimba ezibalulekileyo kwi-glucose kunye ne-lipid (okanye i-fat), iquka i-adipose tissue, isibindi, isisu kunye nesisu2.
• I-Rimonabant powder uyatshintsha iifomathi ezifanayo ezibangelwa abantu abalambileyo xa beshiya i-cannabis.
• I-CB1 i-receptor ivaliwe kunye ne-Rimonabant powder eluhlaza ekwenzeni ukunciphisa ukugqithiswa kweenkqubo ze-endocannabinoid (inkqubo ye-EC) .3,4 Inkqubo ye-EC yindlela ebonakalayo yindlela yokuphila eyenza ukuba i-receptors efana ne-CB1 receptor kwaye iboniswe ukuba idlale indima ebalulekileyo ekulawuleni umzimba kunye nokulawula ukulinganisela kwamandla, kunye ne-glucose kunye ne-lipid (okanye i-fat).
7. Yintoni i-Rimonabant powder esetyenziselwa yona?
• I-Rimonabant powder yafundiswa ukuba isetyenziswe ekudibeneyo nokutya kunye nokuzivocavoca ukuphatha izigulane ezigqithisileyo okanye ezigqithisileyo ezichaphazelekayo ngohlobo lwe-2 yesifo sikashukela kunye namazinga aqhelekanga enamafutha egazini.
• I-Sanofi ithi i-Rimonabant powder ingakukhusela umngcipheko wesifo senhliziyo.
• Izigulane ezinomlenze omkhulu (i-102 cm kumadoda kunye ne-88 cm kubasetyhini) kuthiwa zinenzuzo enkulu ekuthathweni kweziyobisi.
I-Rimonabant powder yilezi zixhobo zokuqala kweyeza elitsha elibonakala linciphisa ubunzima bomzimba kwaye liphucula imingcipheko yezifo zeemithwalo yegazi kunye nentliziyo kubantu abagqithiseleyo okanye abagqithisileyo. Sifumene nezifundo ezine ezivavanya ukulahleka kwesisindo, ukuvela kweengxaki kunye nemiphumo emibi yonyango. Ezi izifundo ezine 6625 abantu uthelekisa Rimonabant ngumgubo ekrwada 20 MG idibene nomgubo Rimonabant 5 mg kunye placebo, ezidityaniswe ukutya hypocaloric emva kweminyaka omnye okanye emibini unyango. Ukulahlekelwa kwesisindo esikhulu kunye nokuphuculwa kwimiba yengozi kubonwe emva kwe-20 mg ye-Rimonabant powder eluhlaza. Ezi ziphumo kufuneka zitshintshwe ngokucophelela nangona, ngenxa yezinga eliphezulu lokunqanyulwa kwabathathi-nxaxheba kunye nekhwalithi ephantsi yezifundo ezifakiwe.
Siphetha ukuba: ukulahleka kwesisindo semitha kunye ne-Rimonabant powder kubonakala uphononongo kwaye kuqhutywe uphando olunzulu ukuhlola ukusebenza nokukhuseleko kwe-Rimonabant powder eluhlaza kufuneka uhlalutye ngokupheleleyo umyinge wenzuzo yeso sitsha.
EYurophu, i-Rimonabant powder iphikisana nezigulane ezinexinzelelo olukhulu kunye / okanye izigulane eziphathwe ngamachiza anxamnye nokunyanga. I-Rimonabant powder eluhlaza ayiphakanyiswa kwakhona kwizigulane ezinezinye izimo zengqondo ezingaphendulwanga.
9. I-Rimonabant powder dosage
I-powder Rimonabant ithathwa ngomlomo. I-frequency ephakanyisiweyo yokusebenzisa i-Rimonabant powder eluhlaza yile mini. Inqanaba elilodwa lomlinganiselo we-Rimonabant powder ngu-20mg.
I-Rimonabant powder eluhlaza kufuneka ithathwe kusasa ngaphambi kokutya kwasekuseni. Kungakhathaliseki ukuba nokunyamezela kuninzi, i-Rimonabant powder eluhlaza kufuneka ithathwe imihla ngemihla. Ubuninzi obuphakanyisiweyo bokusebenzisa i-Rimonabant powder yiinyanga ze-24.
• Ukulungiswa kweerimonabant powder dosing regimen akudingeki kwizigulane ezigugile phantsi kweminyaka eyi-75. Izigulane kwiminyaka eyi-75 ubudala kufuneka zithathe i-Rimonabant powder ngokuqapha.
• Ukunciphisa i-Rimonabant i-powder eluhlaza kwansuku zonke akudingeki kwizigulane ezinobungozi obunzima be-hepatic. Ukunciphisa i-Rimonabant powder single dose kungadingeka kwizigulane ezinokulinganiswa okuthe tye. Izigulane ezinobungozi obukhulu becala akufanele zithathe i-Rimonabant powder eluhlaza.
• Ukutshintsha I-Rimonabant powder dosage ayifuni kwizigulane ezinezifo ezinqabileyo kunye nezicwangco. Ukuba isifo esibi sisifo sifumaneka kwisigulane, kufuneka aphephe ukusetyenziswa kwe-powder Rimonabant.
• Iilutsha ezingaphantsi kweminyaka eyi-18 azibandakanyekanga kwizifundo zonyango kunye nokuthunyelwa kwe-post-marketing ye-Rimonabant powder eluhlaza. Ngako oko, i-Rimonabant powder ayifanele isetyenziswe njengonyango olude lwexesha elidlulileyo.
Ukuba ufuna ukuthenga i-Rimonabant powder kwi-intanethi kodwa akakaze uthathe amacwecwe e-loss losses, ufumane iziphumo ezibi kunye neengozi ezinokubakho kwi-Rimonabant powder eluhlaza. Ngaphambi kokuthenga i-Rimonabant powder kwi-intanethi akukho myalelo, unokufumana ulwazi malunga nalo isisindo sokulahlekelwa kwesisindo nge imeyile.
10. Izinzuzo ze-Rimonabant powder & IRimonabant powder benefits
Oku kongeziweyo kunenzuzo elandelayo:
• Kunceda abantu baninzi kwaye baninzi kunzima ukulahlekelwa * nesisindo ngendlela ekhuselekileyo nelula kakhulu. Ngokugqithiseleyo ukugqithisa nesifo sikashukela kuya kwesandla kunye nokuncedisa kunceda kunciphise * iimpawu zesifo sikashukela ukuze umsebenzisi angagqithisi ubunzima kuphela kodwa ufumana uxolo lwesifo sikashukela.
• Ukongezwa kungathengwa nge-intanethi kuthetha ukuba ukufumana kulula kwaye kwakhona kuza ne-30 yembuyekezo yesiqinisekiso semali. Ngoko ke, ukuba kukho ingxaki ngemveliso okanye ukuba ayikusebenzele ukuba uqinisekiswe ukuba ufumane imali yakho.
• Kuza nexabiso elithengekayo kunye neepilisi ezincinane ezinokuginywa lula. Iphilisi kuphela inconywa imihla ngemihla ukufezekisa ukulahleka kwesisindo * ngoko kufuneka ungakhathazeki ngokuthatha iipilisi eziliqela ngemini kwaye ngezinye izihlandlo ukulibala ezinye izilingo.
• Ukuxhaswa kufikeleleke kakuhle kwaye kubhalwe ngokucacileyo ngazo zonke izithako kunye neemali zazo. Oku kwenza ukuba umsebenzisi azi kakuhle ukuba oko bathathayo kubonakaliswe ukliniki kwaye ukuchonga ukuba ngaba nobunzulu kwizithako kwangaphambili.
• Ngexesha usebenzisa i-Rimonabant powder akudingeki ukuba ulambele ngokuzenzekelayo yonke into ehamba ngokubuhlungu nokusebenza ngamandla. Imisebenzi eqhelekileyo yendlu kunye nokuhamba kwanele ukunika iziphumo ezifanelekileyo.
11. Isilumkiso kwi powinabant powder
I-Rimonabant powder ayikhuthazwa ngokukhulelwa kwaye iyaphikisana nabantwana basetyhini.15 I-SPC icebisa ukuba "isilumkiso" ukuba isilwanyana sisetyenziselwa ukuphatha izigulane "ukukhubazeka ngokuthe ngqo kwe-hepatic". I-Rimonabant powder eluhlaza ayilunconywanga kwizigulane ezinesifo esibi kakhulu "kwaye asifanele sisetyenziswe kwizigulane" ezinobungozi obuthakathaka ".15 I-SPC ithi i-Rimonabant powder ayifanele iqalwe kwizigulane ezinokugula okungalawulekiyo kwezifo zengqondo ezifana nokudakumba okukhulu , kwaye loo mqathango ofanelekileyo wesimo sengqondo kufuneka uqalwe kuqala kunye ne-Rimonabant unyango oluphambili lwe-powder oluqwalaselwa xa imeko ilawulwa. Nangona kunjalo, ikwachaza ukuba ukusebenzisa i-Rimonabant powder kunye ne-antidepressant medication ayikhuthazwa, ngenxa yeenkcukacha ezingancinci.
12. Imiphumo emibi ye-Rimonabant powder
Imiphumo emibi ye-Rimonabant powder eluhlaza yinto eninzi kangangokuthi ikwazi ukuphikisa ngokuthe ngqo nayiphi na imiphumo emihle engayifaka. Ngaphandle kwamehlo, kwaxelwa ukuba isiguli se-1 kuzo zonke ii-8 ziye zaphuma kulezi zilingo ngenxa yokuba iziphumo zecala zazingenakuxolisa kubo.
Eyona nto inkulu kunye nemiphumo emibi kakhulu, nangona kunjalo, yayingokwengqondo. Uxinzelelo luye lwadibanisa njengempembelelo echaphazelekayo ye-Rimonabant powder. Olu xinzelelo lwaluyingozi kakhulu kangangokuba lwalufuna unyango olulawulwayo. Ngenxa yokuphumelela kwe-Rimonabant powder against the smoking, abantu abaninzi basebenzise ukutshaya nokuyeka ukuxinezeleka.
Izigulane ezininzi zinamava kwaye zaxela amanqanaba angxakini kakhulu emva kokuthatha i-Rimonabant powder eluhlaza. I-nausea enye yempembelelo yecala eyayinzima kangangokuthi yaqala ukuphazamisa ubomi bemihla ngemihla.
Ukushwankathela, iziphumo ezimbi ezibi zeRimonabant powder zininzi -
Iingxaki zesisu - Enye yeempembelelo eziphawulweyo yi-diarrhea, umlomo owomileyo, ukulahleka kwesidlo, isisongela, ukuhlanza nezinye izifo zesisu.
Iingxaki zesikhumba - Ukujuluka okugqithisileyo kunye nokubetheka kuye kwabikwa.
Iingxaki zeMisculoskeal - Iintlobo ezihlangeneyo, intlungu emva, ukuvuvukala kunye nentlungu kwieton, kunye ne-spasms kunye ne-cramps kwiimisipha ziyimpembelelo eqhelekileyo.
Inkqubo yeNentral Central - Ukunyanzeliswa, ukulahleka kwememori, ukuxhalabisa, ukuguquka kwemizwelo, ukungcola, uhudo kunye nokugula kwesifo.
Nangona iingcali zicinga ukuba ukuba i-dosage iyancitshiswa, ezinye iziphumo ezichaphazelekayo zingalawulwa kodwa ezingatshintshiyo ukuba isilwanyana asizange samukelwe e-US ngenxa yobunzima beempembelelo zayo. Kwakhona, iimiphumo ezibiweyo zithe zatshatyalaliswa kakhulu eziza kuphazamisa iziphumo ezichanekileyo zeziyobisi ngokumalunga nokunciphisa umzimba kunye nokuyeka ukutshaya.
13. Ukuhlaziywa kwempuphu yeRimonabant
Ungamangaliswa yinto endithetha ngayo kule nto Ukuhlaziywa kwempompo yeRimonabant. Sithathe ixesha lokuba sigxininise ngakumbi kwizifundo zesayensi, izithako, iziphumo ezibi, kunye nomgangatho wenkonzo yabathengi. Emva koko sibheke ukuhlaziywa komsebenzisi kuzo zonke i-intanethi. Ekugqibeleni, sishwankathele idatha esiyiqokelele ukukunika inyaniso.
(1) ukhuseleko- "Iingxakini ezinkulu zezempilo"
Umcimbi wethu wokuqala kukukhuseleko kwemveliso. Ngokwe-Editor Research, "Uhlalutyo lweposi lwangaphambili lubonakalise ukuxhaphaka okukhulu kweengcamango zokuzibulala nokuxhomekeka okukhulu kwizigulane eziphathwe nge-Rimonabant powder eluhlaza. Iziphumo zazithetha ngokwaneleyo ukuba kuvunywe ukuvunyelwa kumazwe amaninzi. "
Omnye u-dieter wathi, "NdiseFransi xa kukhululwa le nto kwaye yasebenza kakuhle kodwa ndaxinezeleka kakhulu. Unokuyenza njani loo nto ibuhlungu kwaye ilahlekelwe ngumzimba? "Omnye wathi," Ndikulungele ukuzama nantoni na xa ndisekuncineni kwam. Iziphumo ezibi zibuhlungu, akukho nto ifanelekile ukuziva ngathi. "
Abanye abazange babone ukuxinezeleka okudakisayo njengempembelelo yecala kwaye babe nolwazi oluhle. Omnye wachaza wathi, "Kwakunzima kum kwaye ndilahlekelwa ubunzima obuyimfuneko. Andizange ndibe neengxaki. "Omnye wathi," Andizange ndonwabe njengoko ndiqhelekile xa ndiyithatha kodwa yayisebenza kakuhle ukuba ndiyayisebenzisa kwakhona. "
(2) Ukufumaneka- "Akuvunyelwanga kumazwe amaninzi"
Kunzima kakhulu ukufumana i-Rimonabant powder ngoku ngenxa yokuba ivinjelwe kumazwe apho kwakukho khona. Enye into edidekile i-dieter yathi, "Ndiyayithanda xa ndayisebenzisa ngaphambili kodwa ngoku andinakuyifumana phi!"
Omnye ukhononda, "Andiyiqondi isizathu sokuba into ethile isebenze ayinakwanela kuwo wonke umntu. Zithatha zonke iindlela ezifanelekileyo. "Abanye babenomdla wendlela yokukhusela. Omnye umthengi wathi, "Ndiyathanda ukuba kusebenze kakuhle kodwa kwakuyingozi. Ndiyathemba ukuba inkampani iguqula i-formula ukuze ndiyifumane kwakhona. "
Omnye uthi, "Ndiyakwazi ukufikelela kuwo ngoko kungengowomkhulu kumsebenzi. Akulula kodwa ndingayifumana. "Ngokutsho kophando lwethu, ukhuseleko kunye nokufumaneka zimbini zeengxaki ezinkulu kwi-dieters. Ukuba umkhiqizo awukhuselekile, kunzima ukuthemba ukuba i-Rimonabant powder eluhlaza iya kubakhokelela kwimpilo ephuculweyo kwaye ichitha inzuzo yakho yeziphumo ezimileyo.
(3) Inzululwazi - "Inkxaso Yokliniki Yomeleleyo?"
Kwi-DietSpotlight, ngokukodwa sikhathalele ngokusetyenziswa ngempumelelo kwemveliso. Kwimeko ye-Rimonabant powder, iifundo zibonise ukuba zisebenza kakuhle kwiininzi ze-dieters. Nangona kunjalo, inzululwazi ibonisa ukuba inani elikhulu labathathi-nxaxheba lalinemiphumo emibi ebenokubangela ukufa kwabo. Oku akwamkelekanga.
14. I-Rimonabant powder tablet Recipe
Ithebhulethi ye-Rimonabant ipilisi yenziwe kwizidibanisi ezilandelayo eziyaziwayo ukuxhasa ukulahleka kwegazi ngokukhawuleza * emzimbeni ngokukhuselekileyo:
• I-Rimonabant powder eluhlaza- Esi sisithako esisebenzayo kwi-supplement kunye nalapho ivela khona igama layo. Inceda ekunciphiseni ukutya komsebenzisi kunye nokwandisa * imetabolism emzimbeni okhokelela ekunyuseni izinga lokutshisa amafutha.
• I-Meratrim - Le isilathisi esiphonywe kunye nesivunyiweyo esilungileyo esinceda ukulahlekelwa ngamafutha amanqindi e-okhalweni apho kukho amaninzi amanqatha amaninzi. Iqinisekisa ukulahlekelwa kwesisindo esiphephile * kwaye kwakhona ukuba umsebenzisi ubuyele kuloo mfanekiso okhangayo.
• I-Chromium Polynicotinate - Oku kudibanisa i-chromium kunye ne-niacin kwaye kwandisa * ukuxutywa komrhumo kumzimba womsebenzisi. Oku kuqinisekisa ukuba isongezelelo sisebenza ngokufanelekileyo.
15. Ngaba i-Rimonabant powder nayo inceda ukuyeka ukutshaya?
• I-Rimonabant powder (i-Zimulti e-US) yafundwa ngu-Sanofi-Aventis njengoncedo lokuyeka ukutshaya ngokusekelwe kwizifundo zonyaka ukuya kwabangaphezu kwe-6,500 ababhemayo abanenjongo yokuyeka ukutshaya.
• I-Sanofi-Aventis ifake isicelo esitsha seDrug kwi-FDA, eyayikhupha incwadi engavumelekanga ye-Rimonabant powder eluhlaza ukuze isebenzise ukuyeka ukutshaya. NgoJuni ka-2007, iKomiti yeNgcebiso ngeeDemokhrasi ye-FDA kunye ne-FDA icebise malunga nokuvunywa kwe-Rimonabant powder ngenxa yokuxhalabisa kwimiphumo emibi efana nokuzibulala.
16. Ziziphi iziphumo zee-Rimonabant powder zovavanyo lweemvavanyo zeklinikhi?
• Kwizifundo zeklinikhi, i powinant Rimonabant yayiboniswe ukuphucula uluhlu olubanzi lwezinto zeengozi ze-cardiometabolic kunye nokukhuthaza ukulahleka kwesisindo.5,6
• Phantse kwisiqingatha sezinto eziphuculweyo kwi-HDL-cholesterol, i-triglycerides kunye ne-HbA1C (isalathisi sokulawula ishukela segazi) kwizigulane ezithe zafumana i-Rimonabant powder eluhlaza 20mg yayingaphaya kwelo lilindeleke ekulahlekeni kwesisindo kuphela.
Imiphumo emibi yengqondo yengqondo, njengokuzibulala nokuxinezeleka kwakhokelela ekugqibeleni i-Rimonabant powder yiSanofi-Aventis.
17. I-Rimonabant powder yokuthintela iziganeko zenhliziyo
Ukuvinjelwa kwe-endocannabinoid receptor kunciphisa ukukhuluphala kwaye kuphuculwe ukungaqhelekanga kwezinto ezinjenge-triglycerides, i-cholesterol ye-HDL, kunye nokutya kwegazi kwi-glucose. Sasivavanya ukuba i-Rimonabant powder yayiza kuphucula i-vascular vascular-free.
Olu vavanyo olulawulwa yi-doublebo blind, le-placebo olulawulwa yi-placebo lwenziwa kwiibhedlele ze-974 kumazwe akwa-42. Izigulane ze-18 ze-695 ezibonakaliswe ngaphambili okanye ingozi eyongezelelekileyo yezifo zesifo se-vascular ziye zanikwa ukuba zifumane i-Rimonabant powder eluhlaza 20 mg (n = 9381) okanye i-placebo efanayo (n = 9314). Ukurhoxiswa kwimiqathango yokuqhelaniswa kwimihlaba, kuphunyezwe ngeenkqubo ezizimeleyo zokuphendula izwi, kwaye bonke abasebenzi abafundayo kunye nabathathi-nxaxheba baxakeke kwiqela lesabelo. Isiphelo sokugqibela sasiyinxalenye yesifo senhliziyo, isifo se-myocardial, okanye i-stroke, njengoko kunqunywe ngokugweba. Uhlalutyo lwenjongo yokunyanga. Olu phofu lubhaliswe ngeCliniicalTrials.gov, inombolo ye-NCT00263042.
Ngexesha elilandelelanayo lokulandelwa kwe-13 · Iinyanga ze-8 (95% CI 13 · 6-14 · 0), ityala liye laphelelwa ngethuba ngenxa yokukhathazeka ngamagunya olawulo lwempilo kumazwe amathathu ngokuzibulala kubantu abafumana i-Rimonabant powder eluhlaza. Bonke abathathi-nxaxheba bahlaziywa. Ekupheleni kwesivivinyo (Nov 6, 2008), ukuphela kokugqibela komxholo wokufa kwesifo senhliziyo, i-myocardial infarction, okanye i-stroke yenzeke kwi-364 (3 · 9%) izigulane ezabelwe i-Rimonabant powder eluhlaza kunye ne-375 (4 · 0%) eyabelwe kwi-placebo (ingozi ye-0 · 97, 95% CI 0 · 84-1 · 12, p = 0 · 68). I-Rimonabant powder eluhlaza, isisu (3038 [33%] vs 2084 [22%]), i-neuropsychiatric (3028 [32%] vs 1989 [21%]), kunye nemiphumo engundoqo yemiphumo yengqondo (232 [2 · 5%] vs I-120 [1 · 3%]) yayinyuka kakhulu xa kuthelekiswa ne placebo. Izigulane ezine kwiqela lePowinabant powder kunye neqela le-placebo lizibulale.
Ukupheliswa kokukhawuleza kwesi silingo kunemfundo ebalulekileyo yokuphuhliswa kweziyobisi. Isilwanyana esithengiswa ukulahleka kwesisindo, kodwa ukuvavanywa ekuphuculeni iziphumo zentliziyo ye-cardiovascular, kubangele inqanaba leempembelelo ezinkulu ze-neuropsychiatric ezithathwa njengezingamkelekanga ngamagunya okulawula, kwaye zombini izilwanyana kunye netyala lapheliswa ngokukhawuleza.
18. Thenga I-Rimonabant powder online
(1) Thenga i-Rimonabant powder Imibuzo & Izimpendulo
Q: Ziziphi izithako kwi-Rimonabant powder eluhlaza?
A: I-Rimonabant powder iyona isithako esikhulu esilunxwemeni.
Umbuzo: Ziziphi iimiphumo zomphumo we-Rimonabant powder eluhlaza?
A: I-Rimonabant powder eluhlaza ingabangela iingxaki zengqondo ezifana nokudakumba kwabasebenzisi. Ukongezelela, le nkunkuma iyaziwa ngokubangela ukuthambekela kokuzibulala kumsebenzisi kunye nezinguqu ezingavamile kwiimvakalelo. Ezinye iziphumo ezichaphazelekayo zingabandakanya ukutshiza kunye nokukhupha okugqithisileyo.
Q: Ndiyazi njani ukuba i-Rimonabant powder eluhlaza ilungile kum?
A: Ukukhetha umkhiqizo olungileyo ngumbuzo we-#1 oceliwe ngabafundi beDetSpotlight. Sincoma ukuba sizame nayiphi na imveliso ngaphambi kokuyithenga kwaye sazi ukuba ukufumana umkhiqizo ngesampulu isampu sekusondeleyo - ngoko ke senze imveliso yethu, Burn HD, kunye nezithako ezixhaswe ngokwesayensi.
Cofa apha ukuze ufumane yakho isampula lethu lokutshisa elinamandla namhlanje.
Umbuzo: Ngaba i-Rimonabant powder yenziwe ikhusi?
A: Ewe, isilwanyana sinyanisekile kwiimangalo zayo kwaye sinceda abasebenzisi bayo ukuba banciphise ukutya kwabo, ngaloo ndlela banciphise ukukhuluphala.
Umbuzo: Yintoni xabiso le-Rimonabant powder?
A: Ixabiso le-Rimonabant powder eluhlaza yi-2600 / kg, i-USD350 / 100g. Ubungcwele bumnqweno ngu-98%.
Q: Ndingayithenga phi i-Rimonabant powder eluhlaza?
A: Unokuyila i-Rimonabant powder eluhlaza kwi-intanethi kwi-www.aasraw.com
Umbuzo: Ndingayithatha njani i-Rimonabant powder?
A: I-powder Rimonabant ifumaneka kwiqondo eliphantsi le-5mg ukuya kwiqondo eliphezulu le-20mg. Imfuno yakho kunye nendlela yokulawula ngayo kufuneka ivela kwingcebiso yongcali yokutya. I-Rimonabant powder eluhlaza ayilungiselelwe ukuba isebenze yodwa. Yenzelwe ukuba isetyenziswe ngokubambisana nokutya okufanelekileyo kunye nokuzivocavoca ukuphucula impilo yomntu ngelixa uyanciphisa ubungakanani bentambo yakho.
Umbuzo: Ndiqhagamshelana njani neRimonabant isevisi yamakhasimende obisi obomvu?
A: • Ukuqhagamshelana nathi nge-email inquiry system, okanye ummeli we-skypecustomer service (CSR).
• Ukusinika ubuninzi bakho kunye neadesi.
• I-CSR yethu iya kukunika isingeniso, ixesha lokuhlawula, inombolo yokulandelela, iindlela zokuhambisa kunye nomhla wokufika oqikelelwayo (i-ETA).
• Intlawulo eyenziweyo kwaye iimpahla ziya kuthunyelwa kwiiyure ze-12 (Ukuze ulandelwe ngaphakathi kwe-10kg).
• Izinto ezifunyenwe kwaye zinike izimvo.
Q: Ndiyakwazi ukubuyela kwi-Rimonabant powder eluhlaza?
A: Ewe, i-Rimonabant powder ingabuyiselwa ngokwemigaqo yokubuyisela yomthengisi wayo okanye umthengisi.
Q: Ziziphi izikhalazo eziqhelekileyo malunga ne-Rimonabant powder eluhlaza?
A: Abanye abathengi baye bakhulisa izikhalazo malunga nemiphumo engathintekiyo yecandelo le-Rimonabant powder.
(2) I-Rimonabant powder eluhlaza
Kukho izinto ezininzi zokulahlekelwa kwemilinganiselo emarike, kwaye i-Rimonabant powder eluhlaza ngumnye wabo, othandwa ngabantu abaninzi kakhulu. Ngoxa i-Rimonabant powder ingavunyelwe ukusetyenziswa kumazwe amaninzi, kodwa ngenxa yokulawula kwayo inamandla ukuze kufikelelwe umgangatho wokunciphisa ubunzima, kusekho imfuneko enkulu emarike, ehambelana Ababoneleli beefowuni ezigqithisiweyo zeRimonabant ziya kuvela. Umthengisi owaziwayo ngu-AASraw, impendulo yomsebenzisi intle kakhulu, kwaye inenzuzo enkulu ekuphatheni.
I-AASraw Biochemical Technology Co., Ltd., inkulu ekunikezeni i-Anabolic Steroids ipowder eluhlaza (Testosterone, Trenbolone, Boldenone, Nandrolone, Drostanolone, i-Methenolone, i-SARMS, njl.), izidakamizwa ze-PCT, i-PAR, i-powder eluhlaza, i-hormones ye-sex ekhulayo.
Thenga i-Rimonabant powder kwi-AASraw, unokufumana:
Umgangatho ophezulu ngexabiso elikhuphisanayo:
1) Ucoceko:> 99%
2) Singumvelisi kwaye sinokubonelela ngeemveliso eziphezulu zexabiso ngeteksi.
- Ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo:
I-1) Ipapa inokuthunyelwa kwiiyure ze-24 emva kokuhlawula. Inombolo yokulandelela iyatholakala
2) Ukuthunyelwa okukhuselekileyo nokuqondayo. Iinkqubo ezahlukeneyo zokuthutha ozikhethile.
- SinamaKlayenti kulo lonke ihlabathi:
I-1) Iinkonzo zobungcali kunye namava anotyebi enza ukuba abathengi bazive bekhululekile, isitokwane esaneleyo kunye nokuhanjiswa okukhawuleza kudibana nomnqweno wabo.
I-2) Impendulo yemarike kunye nempembelelo yempahla iya kuxabiswa, ukuhlangabezana neemfuno zabaxhasi ngumthwalo wethu.
I-3) Umgangatho ophezulu, intengo yokukhuphisana, ukuhanjiswa okukhawuleza, inkonzo yokuqala yokufumana ithemba kunye nodumo oluvela kubaxumi.
I-1) Ukuhanjiswa okukhuselekileyo: Ukwahlukana kwesiteshi, ukhusela ubumfihlo babathengi.Kanti ukuba kunjalo, qinisekisa ukuthunyelwa kwakhona.
2) Ungalokothi utshintshe: Imveliso iya kuhlala ihlambulukile, ayiyi kutshintsha, Umgangatho ophezulu yinkcubeko yenkampani yethu.
3) Iinkonzo ezilungileyo: Ngokukhawuleza kunokwenzeka ukuxazulula iingxaki zabathengi, ukwenzela ukuba abathengi bafumane iimpahla ngokukhuselekileyo.
Ukulahlekelwa kwesisindo esikhulu: I-Sibutramine HCL powder, I-Orlistat powder, i-Lorcaserin HCL powder,I-Clenbuterol HCL powder, I-Syneprine HCL powder.
tags: ukuthenga i-Rimonabant powder, I-Rimonabant powder, Ipowuni yeRimonabant yokuthengisa, Abaxhasi be-powder Rimonabant
Thenga i-Dutasteride Powder Online: Ukusetyenziswa, Isisombululo, Imiphumo emibi	Ndingayithenga phi i-high quality finasteride powder